Maina: Mịnịstrị na-ahụ maka okwu ala anyị enwetaghị ikike n’aka m – Oyo-Ita – hoo!haa!!
Onyeisi ndi ọrụ bekee ala anyị, Winifred Oyo-Ita, ekwuola na Mịnịstrị na ahụ maka ala anyị enwetaghị ikike n’aka ya tupu ha akpọghachi Abdulrasheed Maina, onue bubu onyeisi oche otu aka ọkụ onyeisiala hiwere maka ịghazigharị okwu banyere ụgwọ ezumike nka ( Presidential Task Force on Pension Reform).
Maina, onye nke a chụrụ n’ọrụ n’afọ 2013 maka iri ngari n’ego ezumike nka ma bụrụkwa onye echere na ọ gbagara mba ofesi.
Ka osinadị, ọ malitekwara ọrụ na Mịnịstrị na-ahụ maka ala anyị n’ọnwa gara aga, ka a kpọghachitere ya azụ na nzuzo.
Ya bụ ihe butere ihe ihere n’ebe Gọọmentị nọ nke mere ndi ọnụ na-eru n’okwu na Gọomentị ji azọzị isi onwe ha.
Ụnyahụ, ka kọmiti ndi ụlọ nzuko omebe iwu nta nke ala anyị (House of Representatives) hiwere maka inyocha okwu ahụ na-aga n’ihu n’ọrụ ha, Oriakụ Oyo-Ita sịrị na Mịnịstrị ahụ enwetaghị ikike n’aka ya.
“Eziokwu adịghị n’okwu Ode akwụkwọ ọrụ bekee nke Mịnịstrị okwu ala anyị, Abubakar Magaji, kwuru were sị na m nyere ntuzi aka eji kpọghachite Maina” Oyo-Ita kọwara ka ọ na-azaghachi Mazị Magaji.
N’okwu nke ya Mịnịsta na-ahụ maka Akụnụba, Kemi Adeosun kwuru na oge ikpeazụ Maina riri ụgwọ dịka onye ọrụ bekee bụ na Febuwarị afọ 2013 tupu achụọ ya. O kwukwara na ihe ndi ọkaiwu Maina kwuru bụ na ọ ka na-eri ụgwọ ọnwa bụ ezigbo asị.
N’otu aka ahụ, Ibrahim Magu, onye nogodu dịka onyeisioche Kọmishọnụ okwu banyere iri ngari bụ Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), gwara kọmiti ahụ na enweghi mgbe Maina nyefere komishọnụ ahụ ụlọ ndi ọ napụatgasịrị n’aka ndi zuru ego ezumike nka ndi ọrụ.
Magu sịrị na EFCC napụtara ụlọ ndi ahụ site na nnyocha nke ha meere onwe ha.
Ndi kọmiti ahụ gbasiri Mịnịsta na-ahụ maka Ikpenkwụmọtọ bụ Malami ajụjụ ike maka na ha sịrị na ọ dị ka ọ bụ na ụlọọrụ ya ka okwu ahụ siri malite.
Mana Malami kwuru na ya akwadoghi mkpọghachite Maina maka ọ bụ “okwu a ka na etinye ọnụ”.
Ọ sịkwara na Maina jiri aha nwa ya nwoke bụ Faisal Abdullahi zụọ ụlọ ruru ijeri puru ijeri Naịra.
Previous Post: ỌYỊ, ENYI (Friend)
Next Post: Kwuo eziokwu maka ụmụagbọghọ Chibọk- Jonatan na-agwa Shetima
ya gaziri ndi ogba ozi nka